सुन्दर कसरी बन्ने ?
सुन्दर कसरी बन्ने ?
२०७५ माघ २५ शुक्रबार ११:२४:००
पछिल्लो समयका मानिस चरित्र भन्दा पनि बाहिरी आवरणको बढी मुल्यांकन गर्छन् । अर्थात सुन्दरताको । हुन पनि मानिसको बाहिरी आवरण अर्थात सुन्दरता, लवाई खवाइले पनि केही हदसम्म मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । सुन्दर हुन मानिसले विभिन्न तरिका अपनाउँछन् । श्रृङगार देखि लगाउने लुगासम्ममा मानिसले विशेष ध्यान दिन्छन् । सुन्दर देखिनु भनेको अरूलाई सजिलै आफूतिर ध्यानाकर्षित गर्नु पनि हो । यसकारण, सकेसम्म आफू सुन्दर देखिऊँ भन्ने जो–कोहीको चाहना हुन्छ । यद्यपि, सुन्दर देखिन हेयर स्टाइलदेखि मेकअप र ड्रेसअपसम्म मिलेको हुनुपर्छ भन्ने धेरैलाई हेक्का नहुन सक्छ । अब सन्दर कसरी देखिने ?
१ छालामा निखार
२ सनब्लक मोस्चराइजरको प्रयोग